Gpws kusashanda chero ndege
mubvunzo Gpws kusashanda chero ndege
1 gore 7 ago #760 by aamalk
Ini ndakapoteredzwa pedyo ne5 kuwedzera pamusoro pemakwikwi ayo akati iine gpws asi ini handina kunzwa chero chii kana i landing.do iwe unoda kuibatsira pane imwe nzvimbo kana inoshanda pakarepo?
1 gore 2 ago - 1 gore 2 ago #937 by DRCW
IFSX mafaira mazwi anoshandiswa achishandisa dll files uye 64 bit version inovashandisa vachishandisa xml. Kana iwe uchitya iwe unogona kuchinja mafaira aya pane xml
Kunyange zvazvo zita rayo rinoreva FSX, chiyero ichi chichashandawo muFS2004. Inonyanya kubva pane dsd_xml_sound3.gau.
gauge10 = dsd_fsx_xml_sound! Inzwi, 2,2,2,2,. / gauges / dsd_xml_sound.ini
Kuchinja kunonyanya kukosha mujiji basa ndiyo nzira iyo inogadzirisa maitiro ehurukuro. Zvinyorwa zvekare zvejairo zvakashandiswa pakureba kubva ku0 kusvika ku100 kuwana / kutara mazinga emavhu. Ndakashandura izvi kusvika kune zvakashandiswa na DirectSound, -10000 (inomiririra zvikuru, yakanyanya kunyarara) ku0 (inomiririra izwi rose). Kana kuchinja uku kuri kukonzera matambudziko nemutemo wako uripo, unogona kuisa shanduko (L: Old Volume Control) kuti usimbise chirongedzo kumashure yekare nzira yekugadzirisa zvirongwa zvevhesi. Ona pasi apa.
Kune avo vasina kushandisa mapurogiramu epakutanga ejeri, ruzha rwega roga runotungamirirwa ne XML yakasiyana L: Variable (inotevera inonzi inonzi LVar.) Unodzora ruzha nekuisa mutemo wekutarisa (LVar) kune kukosha kunoenderana kune chiito chaunoda. Iwe unogovera LVars kuti inzwike uchishandisa faira yefaira. Tsanangurai mafaira ekufambisa pane panel.cfg, sechishanu yepamuti ye "Sound" gauge element - ona muenzaniso uri pamusoro. Ijiji ichatevera nzira dzinotevera pakuongorora shanduro yekufaira faira:
1. Iwe unotsanangura nzira inoenderana nokuitanga ne 'dot' - ona samples syntax, pamusoro. Iri dot rinotitsigira mukati medu muFS huru folda. Mumuenzaniso wepamusoro, the .ini faira iri muFS main gauges folder, uye inonzi dsd_xml_sound.ini. Iwe hausi uwandu huno fs gauges folda, unogona kutsanangura chero faira iwe unofarira Dambudziko rako chete nekuvimbisa mushumiri wekupedzisira ane faira yaunotsanangura muFS yavo yefaira. Iyi ndiyo nzira inoshandiswa neshanduro dzakapfuura yejiji rwenzwi.
2. Zvimwe, unogona kuvaka nzira yakakwana kune yako faira file. Ijiji rinotarisa pamusoro paro nzira yakakodzera zita. Nokubvisa zita rejiji pachedu, isu takasara nemugwagwa unoenda kune faira yakananga uko kuiswa kwacho kwaiswa. Munzira iyi yezita, iwe uchawedzera faira yakananga uye zita refaira yefaira yako yefaira. Semuenzaniso, ndege yangu yomufaro inowanzoiswa mufaira inonzi:
Kuisa mujeri mufurati yepanepa, uye kujekesa faira yefaira saizvozvo:
gauge37 = dsd_fsx_xml_sound! Inzwi, 2,2,2,2, \_ dsd_fsx_test_sound.ini
zvichaita kuti zvigadziriswe
D: \_ fsx \_ Ndege \_ b777_300 \_ panel \_ dsd_fsx_test_sound.ini - kuisa faira yefaira mufurati yepane ndege, nejiyo yejasi
Ndapota cherechedza kuti nenzira iyi, hapana 'dot' pakutanga kwepaneti yeplaner.cfg, asi tambo inotanga ne / kana \_ character. Ijiji yacho ichabata ne / uye \_ mashizha zvakaenzana.
3. Kana iyo yero isina kuwana dot kana kuburitsa unhu pakutanga kwetambo yepiramu, ichatsvaga tambo kune unhu hwekoloni ":" Kana ikawana imwe, inofunga kuti iwe wakapa nzira yakakwana kusanganisira tsamba yekutya, kune faira yefaira uye ichaedza kuitakudza pasina kuchinja kupi zvako.
Handikurudzire nzira iyi kune chero chinhu chipi zvacho kunze kwekushandisa padziviriri pakombiyuta yako. Kunyatsotarisa faira yefaira cheni se "D: \_ fsx \_ gauges \_ sound_config.ini" iri kukumbira dambudziko kana iwe uri kugovera jekoni. Isu hatinyatsozivi kuti mushandi wekupedzisira akaisa FS.
4. Kana iyo yero isina kuwana ":" "unhu, inofungidzira kuti uri kuedza kutsanangura nzira nenzira imwecheteyo sezvinoitwa muitiro 2, pamusoro. Ichinosimudzira iyo inogadziriswa piramiti yakananga kumugwagwa iyo majiro acho akatakurwa kubva, zvichipa hutu hunoshandiswa sezvinodiwa. Kuramba nemuenzaniso wechikwata changu chekuedza, nejiji yakatakurwa kubva pane fomati yefaira, ichipa faira yefaira yakadai seyi:
gauge37 = dsd_fsx_xml_sound! Inzwi, 2,2,2,2, panel_sounds \_ dsd_fsx_test_sound.ini
D: \_ fsx \_ Ndege \_ b777_300 \_ panel \_ panel_sounds \_ dsd_fsx_test_sound.ini
5. Default configuration file. Kana pasina faira yekugadzirisa inotsanangurwa, kana kana iyo yejiyo isingagoni kuwana faira yakatsanangurwa, inoshandisa zita risipo. Ijiji rinotarisa pamusoro payo nzira yakakodzera zita (kana iwe kana kuti munhu wekupedzisira akazvitumidza zita racho), bvisa ".gau" file extension, uye uwedzere ".ini" Izvo zvisingaiti faira faira naizvozvo mune imwe faira the gauge, ine zita rimwechete repasi. Iyi nzira inofanira kuderedza zvinodikanwa kutsanangura faira yefaira mune dzakawanda zviitiko. Cherechedza kuti kana chiyero chiri kushandisa zvisiri izvo nokuti hauna kutsanangura faira yefaira, ichangoita izvi pasina mamwe ado. Zvisinei, kana iri kushandisa kusakanganiswa nokuti haigoni kuwana faira yawakatsanangura, ichaita kuti Windows message box ikuudze iwe saizvozvo.
Kugadzira File Configuration
Itaji yefaira inoshandiswa kwezvinhu zvakawanda. Chinokosha pane izvi ndechekugadzirisa kupikisana pakati pemanzwi aunoda kutamba uye maLVars aucashandisa kudzora iyo mhere. Kana iwe wakatarisa muenzaniso .ini mafaira ekunyora pamagumo ebhuku rino, uchaona kuti rine zvinyorwa zvitatu zvemashoko. Pakati idzi, rimwe rakanyorwa [Mharidzo] uye rimwe rakanyorwa [LVars]. Mumwe nomumwe ane rondedzero yezvinyorwa zvakaverengwa. Nhamba yekuverenga ndiyo iyo kubatana pakati pezwi neLVar kunotangwa. Ndapota cherechedza kuti iyi ndiyo chete inoreva kuverengwa kwezvinyorwa. Izwi riri panopinda Sound00 inofananidzwa neLVar paLvar00, inzwi riri panopindwa Sound01 rinofananidzwa neLVar kuLvar01, nezvimwewo.
Sezvo iwe ungangodaro wakaunganidza ikozvino, pakurondedzera LVars muefaira yekugadzirisa, unongopa zita risina zita. Iwe hauna kuwedzera "L:" pakutanga, kana ", nhamba" pakuguma. Izvi hazvina chokuita nekuti iwe uchawana sei zvigadziri mu XML, zvinongobatsira chete nenzira iyo C / C ++ gauge inoshanda nemitemo.
Paunenge uchisika zvinyorwa zvekuti zvinonzwika iwe pachako mune faira yako yefaira, iwe unogona, kana uchida, tsanangura ivhu rinoshandiswa kune rwiyo kana rakatakurwa. Ona zvinyorwa zviviri zvokutanga zvinonzwika mumuenzaniso .ini faira iri pasi apa. Iyi sarudzo inobatsira kana iwe, kana mushure wekushandisa kwechigadzirwa chako, unonzwa ruzha rwakanzwika kana ruzha, sezvakanyorwa, rwakanyanya kwazvo. Iwe unogona kutsanangura ivhu kuti ishandiswe uye saka haufaniri kunetseka kuisa iyo mukati mejiji yako. Kunyatsotarisa maitiro ehurukuro nenzira iyi hazvizokudziviriri kubva pakushandura huwandu hwehuwandu gare gare.
Paunenge uchitaura zvinonzwika mufaira rekugadzirisa, huwandu huchatevera mitemo yakafanana yekutaura mazita akajeka sezvaanoita pakutsanangura zita refaira yefaira. Iwe unogona kushandisa nzira yeruzhinji (kutanga ne "dot" uye achitaura kune faira mukati meFS folda muti) kana iwe unogona kuvaka nzira yakakwana, uchishandisa nzira kuenda kufaira yefaira sechando (nekuratidza \_ kana / as chimiro chokutanga chetamende yakagadziriswa, kana nekunyora faira uye faira kunze kwekutungamirira slash.) Ona mheyo yekutanga yekuisa mumuenzaniso .ini faira iri pasi apa. Inotsanangura faira inonzi PanelSounds, iri mukati mefaira apo faira yefaira inowanika, senzvimbo yefaira rezwi.
Ijiji yacho haichazovhenekeri mazita emanzwiro ega pajiji yeyo nguva. Zvisinei, iyo inoshandisa Windows message box kuburitsa mutseti kuti izwi rimwe chete harigone kuwanikwa apo kuedza kunoitwa kutamba inzwi.
Zvirongwa zviri muboka rechitatu, [Config] pane imwe neimwe inongororwa gare gare.
Kuti uchengetedze ruzha rwakapiwa, inongova nyaya yekuisa LVar iyo yakafanana nehuwandu hwakanyorwa pasi apa nekuda kwechiito chaunoda:
1 (> L: SomeXMLControlVar, nhamba) icharira rwiyo kamwe, pasina kuchinja kunogadziriswa kugadziro yevhuru kana pan.
0 (> L: VamweOtherXMLControlVar, nhamba) inomisa inzwi kana iri kutamba.
8 (> L: AsiAnotherXMLControlVar, nhamba) inotanga kutora zvigadziridzo zvezvino uye zvepanji. Izvo zvichazovashandura kune runyararo mubvunzo, uye pakupedzisira, nekutanga kutamba inzwi mulooping mode.
Kudzora kushandiswa kwezvinhu zvinogona kushandisa zvinotevera:
1 - Mhanya inzwi kamwe, usingashanduri magadzirirwo ehurukuro kana panji.
2 - Shandisa inzwi sechinhu chisina kumira, usingashanduri magadzirirwo ehurukuro kana pan.
3 - Isa rwiyo rwezwi, uchishandisa mamiriro akawanikwa muBhuku rakasiyana-siyana, ona pasi apa.
4 - Tora inzwi razvino romuviri wekuteerera, uchiisa muBhuku rakasiyana-siyana rinonzi VariOut.
5 - Isa gango rehurukuro, uchishandisa sarudzo inowanika pane zvakataurwa PanIn zvakasiyana.
6 - Gamuchira pari yemaoko ikozvino kuisa, kuisa iyo pane yakasarudzwa PanOut inoshandiswa.
7 - Dzadza inzwi kamwe, asi tanga waisa gwaro uye pani kune zvigadziriswa zviri muBhukuIn uye PanIn variables.
8 - Shandisa inzwi sechiso, asi tanga waisa gwaro uye pani kune zvigadziriswa zviri muBhukuIn uye PanIn variables.
9 - Tora chimiro chekutsvaga kwezwi. Zvichadzoka 1 kana kutamba inzwi kuri kuvhara, 0 kana inzwi riri muchitambo kamwe chete kana kuti hachisi kutamba zvachose.
10 - Chengeta inzwi. Mharidzo ichangoerekana yadzidzirwa pane gauge exit, asi kana faira rehurukuro ihuru, uye iwe wapedzerwa nayo, unogona kuda kuisunungura pakarepo, nekudzorera memori. Uyu murairo unogonawo kubatsira panguva yekuedzwa. Iwe unogona kuita shanduko kune ruzha uye unodzokororazve, usingataurizve jeri rose.
11 - Takura inzwi, uchishandisa Windows voice device. Nenzira yekuti chirongwa chichashandisa Windows sound device yekutamba inzwi. Kana iwe uchida kushandisa Windows voice device (kazhinji kechipiri kadhi rakanzwika, kana chipangizo cheHS sound) unogona kushandisa kukosha kwe11 kuti utakure ruzha rwekutamba padii yezwi. Yese yemamwe mirairo, kana vachifanira kutakudza rwiyo vasati vaita basa ravo pachavo, vachaisa mutinhiro weWindows sound device. Kana iwe uchida kushandisa chipinzwi chezwi, iwe uchada kushandisa mutemo uyu kuti utange kutakudza rwiyo usati waita chero chimwe chinhu naro. Izvo izwi rinofanira kunge rakagadzirwa sechinhu chakafanana nedhidhiyo inonzwika, inzwi rinotakurwa richishandisa chipinzwi chiripo. Kana iwe uchida kuti ruzha rwuri kutamba kuburikidza neheadset user, kana uripo, unogona kushandisa chinhu ichi. Kana mumwe mushandisi asina headset, inzwi rimwe chete richaderedzwa nemhando ipi zvayo yakashandiswa inoshandiswa nemunhu. Yakabatanidzwa neplate iyi inoshandiswa iyo inobvumira musikana kuti ataure zvakajeka maikironi anonzwika ejairo yekushandisa. Ndinotarisira kuti munenge mamiriro ezvinhu ose, izvi zvinoshandiswa hazvizodiwi. Ichinofanira kungodiwa chete kana mudziyo achifunga kuti maWindows default values ​​haafanire FS, asi haafariri kuchinja Windows defaults.
12 - Sezvo 11 iri pamusoro, asi inotakura inzwi riri kushandisa Windows sound device.
Muchikamu cheChechi ye .ini file, zvinhu zvinotevera zvinogona kuiswa. Izvo zvose zvinoratidzirwa nehutano hwavo husina kukwana.
Izvo zvisipo ndeye 10, asi huwandu huri iko zvino 1000. (Hungu, iwe unoverenga izvo zvakarurama!) Handigoni kuona munhu achishandisa izvozvi, asi chiyeuchidzo chinopiwa zvakasimba zvino, saka hapana chakaipa mune zvakanyanya kukwana. Ichabvumira vashandisi vakazvitsaurira kuti varege kuendesa pane imwechete muenzaniso wejiji mubhokisi rimwechete. Ndakaona izvozvo zvichiitika. Kuchengetedza huwandu kune huwandu hwemhanzi yaunoshandisa iko kuchaderedza zvose CPU nekushandiswa kwepfungwa nejiji.
Muchiitiko cheimwe mhando yekanganisa inenge ichiitika, chirongwa chejiji chechigadziro chichagadzirirwa kune ichi chinokosha. Izvo zvachose ndeye -1. Iwe unogona kusarudza chero huwandu hwedzero iwe unofarira, kunze kwehuwandu kubva ku1 kusvika ku99, iyo yakachengeterwa mirairo chaiye. Ijiji ikozvino ine mawandu eWindows Message Boxes akavakwa mune izvo zvicharatidzika pane imwe nguva yekanganiso. Ndinotarisira kuti iwe chete waunotarisa unozoitika kana iyo yeji yegeji isinganzwisisi faira rakadudzwa mu .ini faira. Kuti zvive nyore kugadzirisa zvinetso, zvichazivisa musikana iyo faira yakanga isina kuwanikwa. Kana kukanganisa kuchiitika, chero humwe huri kuchinja kune iyo inzwi rekutarisa shanduko icharegererwa. Mimwe mhere-mhere ichagadziriswa zvakadaro.
Iwe unogona kuisa mutsauko uyu kune 3 mararamiro anoreva.
1 - inomira zvose zvinzwika zvino zviri kutamba.
2 - inotinhira zvose zvinonzwika. Iko inogadzika yehuwandu hwavo -10000, asi haitadzi kuti vasaita.
3 - inonongedza mifananidzo yose yakambotumwa. Inodzorera maitiro avo akachengetwa mazwi.
Muchiitiko chimwe nechimwe, shanduko ichadzorerwa ku0.
BhukuVarIn = dsd_xml_sound_volume_in
Shandisai shanduko iyi kuti tsanangurire nzvimbo yekushandiswa kwekushandisa nemutemo weVetVolume (3). Bhuku rinotsanangurwa sechinhu chakakosha pakati pe0 (full volume) uye -10000 (100 db kucherechedza, inaudible.) Mukuita, chero zvigadziriro zvishoma kudarika -3000 (30 db attenuation) hazvingawaniki.
Shandisa iri shanduko kuti ujekese pan yakagadzirirwa kushandiswa nemirairo yeTePan (5). Pan inotsanangurwa sechikosha pakati pe -10000 (yakazara kuruboshwe) uye 10000 (yakazara yakarurama). 0 inonyanya.
Shandisa iri shanduko kuti ugamuchire nzvimbo yakagadziriswa yakagadziriswa nemutemo weG GetVolume (4).
Shandisa iri shanduko kuti ugamuchire pan iri kugadziriswa yakagadziriswa nemutemo weP GetPan (6).
Shandisa iri shanduko kuti ugamuchire mararamiro echigadziro akadzorerwa nemirairo ye Get Looping Status (9).
Ichi chinotsvaga chichangozogadziriswa iyo yakagadziridzwa iyo yakashandiswa apo yekupedzisira kutamba mutemo wakanzwika yakabudiswa Cherechedza kuti iyo yepamusoro yepamusoro haigone kushanda - inogona kunge yakashandurwa nemirairo yeVetVolume.
Ichi chinotsvaga chichangogamuchira pani inoshandiswa apo iyo yekupedzisira yekurayira yakabudiswa. Cherechedza kuti pane gadziriro iyi inogona kunge isisashandisi - inogona kunge yakashandurwa nemirairo yeTePan.
Ichi chinotsvaga chichangogamuchira zvigadziriswa zvinoshandiswa apo iyo yekupedzisira yekurayira yakabudiswa.
Zvimwe LVARS, mazita asina kusarudzwa:
Mune zvose FS9 uye FSX, iri shanduko ichadzoka 1 kana FS's inzwi iri kushanda uye 0 kana isiri. Izwi rejiji rayo rinotevera FS runyararo - vanozoveveve kana FS inzwika kana kana sim inomiswa.
Akagara. Kana yakagadzirirwa ku 1, chiyero chichashandisa yekare yehuwandu hwehuwandu hwe0 kusvika 100, uye 100 inomiririra izwi rose uye 0 inomiririra zvizere. Kana yakagadzirirwa ku 0, chiyero chichashandisa shanduro chaiyo DirectSound, iyo -10000 yakazunungurwa zvakakwana, ku0, iyo inomirira yakazara inzwi. Cherechedza kuti kana chiyero chinosangana nemafungiro akanaka ezvinyorwa mu [Sounds] chikamu che .ini faira, inofungidzira kuti unoda kushandura mararamiro ekare uye uchaisa shanduko iyi maererano. Nokuda kwetsika yakananga, RunSoundSound yakaratidza kuvharirwa mu 100ths ye decibels, saka kukosha kwe -10000 kunomirira kuvharwa kwe100 decibels. Usachinja shanduko iyi kana yaiswa - zvinhu zvakaipa zvichaitika.
Ichi chinotsanangura chicharatidza kana izwi rega rega harinowanikwa. Inodzorera 1 kana iyo inenge yakasiyana Windows inzwi uye mazwi, uye 0 zvimwe.
Izvi zvinoshandiswa dzoka tsanangudzo yakazara pamusoro pehuwandu hweHotus Simulator iyo yejiji iri kushanda.
FSVersionMajor anodzoka 9 yeFS2004 uye 10 yeFSX. Inopiwa kana iwe uchida kushandisa chero shanduro yemutauro chaiyo mujiji yako.
FSX chete. Inodzorera 1 kana kubatana kwaSimConnect kwakagadzirwa uye 0 dai yakanga isiri.
Kudzoka 1 kana kuenzanisa kwakamira, uye 0 kana isiri iyo.
Mune zvose zviri zviviri FS9 neFSX, iri shanduko ichadzoka 1 kana kuyerwa kwave kuchibudisa inzwi rayo uye 0 kana manzwi acho asingatauri.
Mune zvose zviri zviviri FS9 uye FSX, iri shanduko ichadzoka 1 kana chiyero che XML chave chichitinhira mazwi acho nekuisa GlobalCommands kushanduka kune kukosha kwe2. Kunyange zvazvo mumwe munhu anonzwika achakwanisa kuregererwa nekuisa mavhesi ayo, manzwi haazogadziriswi zvachose nekushandura kwakasiyana-siyana kana kuti pause status. Iwe unoda kushandura unmute nekuisa Global Commands variable kune 3. Kana mazwi asina kuve akajeka, mutengesi uchava nehuwandu hwe zero.
FSX chete. Kudzorerwa kuburikidza neSimConnect.
0 - Kunze (pata) maonero.
1 - 2D cockpit kuona
2 - 3D VC maonero
4 - Orthogonal (map) maonero
FSX chete. Zvichikosha kukosha ndeye zero. Kana yakagadzirirwa kune zvisingabatsiri zero, ViewSystemStatus inokosha, pamusoro, ichadhindwa muWindows Message Box, nguva dzose kana ichichinja. Zviri pachena, kuti uongorore chete.
FS2004 chete. Inodzorera iyo yakaputsika Nguva yezuva inoshanduka.
Kunze kwezvinyorwa zviviri zvokutanga mu [Sounds] chikamu, muenzaniso unotevera unoratidzira hutsika huripo hunoti huchashandisa pasina kushandiswa kwevashandi zvakananga, kana kusina kwefaira yefaira zvachose. Inotanga Inyoyo yeChiratidzo inoratidzira tsanangudzo yezwi rinowanikwa mukati mefaira rinonzi PanelSounds, uye iyi faira iri mukati mefurati yemapuranga ye ndege. Mamwe mazita maviri okutanga Inzwi rakanaka rinoratidzira tsanangudzo yevhoriyamu yepamusoro inofanira kugoverwa inzwi apo inotanga kutakurwa nejiji. Iko yekutanga uye yechitatu inopindira inoratidzira tsananguro yefaira, mukati mefaira, neyo faira iri mune imwe faira sefaira rekugadzirisa.
Sound02 = Izwi \_ dsd \_ dsd_xml_02.wav
Time chokusika peji: 0.316 mumasekonzi